Jaceylkii loo qabay Barack Obama oo qafiifay gudaha qaarada Afrika | Horumar Online
Jaceylkii loo qabay Barack Obama oo qafiifay gudaha qaarada Afrika
November 5, 2016 | Filed under: WARARKA MAANTA | Posted by: Editor Washington (Horumar Online) – Afrika ayaa jacayl xooggan u qabtay madaxweynaha xilka kasii dagaya ee Mareykanka Barack Obama markii 2008 ladooranayay.
Ninkaa ayaa asagu asalkiisu yahay nin madow oo aabihii madow uu ahaa hooyadiina caddaan gaar ahaana aabihii Hussein Obama ayaa kasoo jeeday Kenya.
“Riyadeenii ayaa rumowday; wiilkeena ayaa ah rajadeena”, sidaa ayaa warka madaxdiisa ahaa gudaha Kenya sanadkaa 2008 maadaama Kenyanka iyo dadka Afrika oo dhan ay aad u faraxsanaayeen kuna kalsoonaayeen inuu wax qabad iyo caddaalad dunida kusoo darrin karay.
Waa riyo aan rumoobin iminka iyo hungow lagu hungoobay. Sideed sano ka bacdi xiisihii loo qabay Obama ayaa khafiifay ayadoo in badan ay ku eedeynayaan inuu dayacay in badanna inuuba dibindaabyeeyay oo halligay.
Doorashadii Obama oo ahaa madaxweynihii madow asal ku leh ee abid Mareykanku yeesho ayaa waagaa waxaa aad usoo dhaweeyay doorashadiisa Kenyanka, Afrikaanka, Mareykanka madow iyo badi muwaadiniinta caalamka.
Xataa maalin fasax ah ayaa la iclaanshay gudaha Kenya ayadoo lagu weyneynaayay guusha uu gaaray!
Waxaa aad rajo looga qabay in Afrika iyo dadka madow caalamka oo dhan uu waxtari doono. ‘Afrika Obama aad uguma lug yeelan wax ka qabashada dhibaatooyinkeeda” sidaa waxaa yiri Aly-kahn Satchu oo ah dhaqaaleyahan Kenyan ah.
“Wax badan Afrika ma uusan tarin”, sidaana waxaa tiri Liesl Louw Vaudran oo hayad cilmi baaris oo Koofur Afrika kutaala ka shaqeysa.
Intii uu xilkaa hayay ayaa dunida meelo badan dagaalo la fahmi waayay ka bilowdeen sida Myanmar oo Muslimiinta Rohingya aad loogu xasuuqay oo ay ku hoobteen. Diyaaradaha aan bayloodyada lahayn ee drones-ka loo yaqaano ayaa dawladiisu bilowday inay dadka ku leyso dambiileyaal dad ay u heysatay iyo xataa masaakiin aan waxba galabsan.
Dunida Carabta ayaa barnaamij dawladiisu taageertay oo baraha bulshada loo adeegsaday laguna magacaabay Arab Spring oo la macno ah Gu’gii Carabta [Rabiicul Carabi] waxaa lagu afgambiyay nidaamkii maamul iyo kala dambeyntii dalal badan oo dunida Carabta kuyaala sida Tunisia, Libya, Algeria, Masar, Baxreyn iyo Suuriya oo ilaa hada dagaalkii ka bilowday uu socda masaakiinta iyo ilmahana lagu xasuuqo.
Dawladiisa ayaa ayadoo kaashaneysay NATO waxay u gacma qabteen dawladii iyo hoggaamiyihii Libiya Mucamar Al-Qadaafi fallaago ku kacday ama ay reer Galbeedku kusoo kiciyeen ayagoo markii hore doonayay inay ku tirtirsiiyaan inuu dal kale aado si ay halkaa inta uga dabatagaan ugu jaqiiqsadaan.
Markii uu diidayna waxaa loo diiday in diyaaradaha dawlidiisu duulaan oo iska caabiyaan fallaagada ayadoo la aasaasay waxa loo yaqaano No Fly Zone ama soone ka caaggan in diyaaraduhu ku dul duulaan khaasatan kuwa Liibiya maadaama NATO kor ka dukheyneysay shacabka iyo dhismeyaasha dawlada Liibiya.
Ugu dambeyntii ayaa arimahaas oo isbiirsaday waxaa ay usuurta galiyeen fallaagadii inay gacanta kusoo dhigto, jirdisho isla markaana durba disho hoggaamiyihii mudada dheer cawimaada la garab taagnaa dadka reer Liibiya.
Liibiya ayaa muwaadiniinta dalkaa u ahayd janno ayadoo daryeelka dadka dawlada Qadaafi ay xil weyn iska saari jirtay-nolosha qeybaheeda kala duwan oo dhan gaar ahaan xagga maciishada, shaqo abuurka, waxbarashada iyo dhammaan arimaha ijtimaaciga ah.
U barbar dhig maanta Liibiyadii xilligii barisamaadkii Qadaafi iyo Liibiyada maanta oo ay tahay halaqyo-galeen [gangs Paradise waxa afka qalaad loo yaqaano].
Qaladka malo awaalka ahaa ee Afrikaanka iyo muwaadiniinta caalamka ayaa markii horeba ahaa in wax isbaddal loo ekeysiiyay [Change We Can] oo halku dhaggiisa ahaa ama lagu soo anqarshay ay run moodaan baddalkii ay wax iskood u qabsan lahaayeen wixii u darana ay ka leexan lahaayeen.
Xataa waxaa aad u kordhay gabbood fallada ka dhanka ah dadka madow ee Mareykanka intii uu xilka hayay ayadoo xataa dadka madow booliskii badbaadin lahaa ay waddooyinka ku tooganayeen dawladiisuna wax sidaa u buuran aysan ka qaban.
Marka laisku soo wada xooriyo dhibaatooyinkaa oo dhan ayaa loo arkaa musiibo inuu ahaa Obama ayadoo haatana murashaxa madaxweynenimo ee xisbigiisa ee uu taageerayo dad badan ay uga soo horjeedaan dhibkii uu geystay ayagoonba taageersanayn Donald Trump.
Dadkaa sidaa uga soo horjeeda murashaxa uu wato ee Hillary Clinton ayaa warbaahinta u sheega had iyo jeer in labada murashax arimahaa aawadood aysan isu dhaamin ayaga oo kii guuleystaba ka fili kara kheyr aad u yar!